ध्रुव सिम्खडा - कान्तिपुर समाचार
समाचार टिप्पणी : कांग्रेस कि कर्पोरेट कम्पनी ?
असार २६, २०७६
कांग्रेस मासमा आधारित पार्टी हो कि सुकिला–मुकिलाहरूले चलाउने कर्पोरेट कम्पनी ? द्रव्य सङ्कलनका योजना बुन्ने र राजनीति गर्ने मनसुवा हो भने जनताको सेवक हुँ भन्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक दलले संगठित व्यापार गर्न सुहाउँदैन । लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने पीँधसम्म पुग्नु पर्छ । सेवाभावले जनजनको मनमनमा राज गर्न सक्नु पर्छ । नेता/कार्यकर्तासित ‘लेवी’ उठाउँदा कांग्रेसको मासवेस चरित्र समाप्त हुन्छ ।
पुस २१, २०७५
स्वाँरा खेतको कुलो । खहरेखोलाबाट आएको कञ्चन पानीको छाँगामा लगाइएको सुप्लाको धारामा रिठ्ठाले नुहाएर झाक्रो फिँजारेर बस्ने त उसको बानी नै थियो । फेरि घर भन्नु नै के थियो र ?
कालिजको नियतिमा कांग्रेस
गाउँमा छँदा सिकारीहरूले कालिजबारे भनेको सुनेको थिएँ, ‘कालिज चराले बेजोडको तीन वेग हान्छ । तेस्रो वेगपछि ऊ फतक्कै गल्छ र पखेटा फट्फटाउँदै लुकेर प्राण बचाउने प्रयास गर्छ । त्यसपछि कस्तो वेग हान्छ त्यसैले उसको भावी जीवन आंकलन गर्छ ।’ कांग्रेस अहिले यस्तै नियति व्यहोर्दै छ । कांग्रेस सत्तामा छैन । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि कहाँ छ ? अत्तोपत्तो छैन ।
प्रतिबद्धता मात्रै समावेशी
असार ९, २०७५
नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशीकरणको विषयलाई पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
सत्तारूढ नै असमावेशी
संविधान र कानुन पालना गर्ने/गराउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसको पहिलो पंक्तिमा सत्तारूढ दल उभिनुपर्छ । संविधान ल्याएको र संविधानको सबभन्दा बढी स्वामित्व लिन खोजेको प्रमुख दल नै यतिबेला संविधान र कानुनको भावनाविपरीत अघि बढिरहेको आभास हुँदै छ ।
ध्रुव सिम्खडाका लेखहरु :
चुनावले चिनाएको नेता
चैत्र १०, २०७४
२००७ सालको जनक्रान्तिमा भाद्गाउाको कााठ क्षेत्रबाट राजनीतिमा होमिएका एक युवक । जसलाई जहानियाा राणाशाहीको अन्याय, अत्याचार र हुकुमी शासन सह्य भएन । जसले राणा शासकको रैती भएर जिउन चाहेन । अनि ऊ प्रजातन्त्र प्राप्तिको क्रान्तिमा होमिन पुग्छ । प्रजातन्त्रका एक अथक, जनप्रिय र भूमि सुधारका पक्षपाती तिनै नेता हुन्— जगन्नाथ आचार्य ।
फाल्गुन ५, २०७४
२०६२/६३ सालको जनअन्दोलनको नारा थियो– ‘समावेशी लोकतन्त्र’ । त्यसैको जगमा माघमा ‘मधेस विद्रोह’ भयो । यसले मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजान बाध्य बनायो । मधेसी, आदिवासी जनजातिले संघीयताका लागि आफ्नो आवाज मुखरित गरेका थिए । त्यसको राजनीतिक कारणमात्रै थिएन । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको मागको उपज पनि हो– संघीयता ।
त्यो अस्कल यो अस्कल
पहिले अस्कल उज्यालो थियो, अहिले अस्कल मलीन भएको छ । किनकि, पहिले अस्कलको ज्ञानचक्षु खुलेको थियो, अहिले अस्कलको चर्मचक्षु मात्र चम्केको छ । यसअघि अस्कलको रङ खैरो–खैरो थियो, अहिले राताम्मे भएको छ ।
जग भत्किने भय
पुस २५, २०७४
‘अल पोलिटिक्स इज लोकल ।’ अर्थात् राजनीतिको नाभी भन्नु नै स्थानीय तह हो । स्थानीय मतदाता तथा जनता हुन् । तिनले नै केन्द्र/संघ र प्रदेशलाई टेको दिने सामथ्र्य राख्छन् । यदि तिनीहरूले नै आम नागरिकको सेवाभन्दा आफ्नो सुविधालाई बढावा दिनथाले भने राजनीति लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुनपुग्छ । राजनीतिको जगै खल्बलिन्छ ।
पहुँच कसरी बढाउने ?
पुस १५, २०७४
मुलुकभर निर्मित भवन तथा अन्य भौतिक निर्माण अपांगता–मैत्री छ्रैनन् । यसको मार खेप्दैछन्, विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका नागरिक । यो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्, मुलुकभरका अपांगता भएका नागरिक । सरकारी वा निजी दुवै क्षेत्रबाट निर्मित सार्वजनिक निर्माणमा सम्बन्धित पक्षले उचित ध्यान नदिँदा अपांगता भएकाहरू पाइलैपिच्छे समस्या भोग्न बाध्य छन् ।